International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Burma News International::22 May 2008
Burma News International::22 May 2008
Junta forces people to tick on referendum eve
Written by S.H.A.N/ Lieng Lern
Local Burmese junta authorities had forced people to tick in support of the draft constitution at night on the eve of the referendum and told them not to leak the news, resulting in 90 per cent support in the Kunhing Township, 141 miles west of Kengtung, capital of eastern Shan State.
Burma Army soldiers arrested in China
Burmese Soldiers guarding villages in Namkham Township, northern Shan State were recently caught by Chinese authorities inside Chinese territory, according to sources.
Arakanese Township to raise 30 million Kyat for Nargis victims
Maungdaw: The Burmese military junta authorities have ordered the township authorities of Maungdaw,awestern border town of Arakan, to collect more than 30 million kyat from the township to contribute toagovernment fund for people affected by Cyclone Nargis in Irrawaddy, said an official in Maungdaw.
Australia donates $1.4 million for Burmese Muslim refugees
Dhaka: The Australian government has donated US $ 1.4 million for construction of new homes for Rohingya refugees in Bangladesh, saidapress release issued by the UNHCR office in Dhaka yesterday.
Seminar held in Chittagong on Rohingya refugee problem
Chittagong: The contentious Rohingya refugee problem cannot be solved without resolving the political imbroglio in Burma , saidapress release issued on May 19, by Neeti Gobeshona Kendra, or Policy Research Centre.
Junta arrests 13 opposition youth leaders
New Delhi â€" The Burmese military junta on Thursday arrested 13 prominent youth leaders of the country's main opposition political party â€" the National League for Democracy -asenior party member said.
Cyclone orphans could be trafficked: Human Right group
New Delhi â€" Orphans from among cyclone victims are in serious danger of being trafficked,aHuman Rights group, said inagrim warning.
Motor cycles commandeered by military regime
The Burmese military junta authorities from Ye, Mon State have been forcibly commandeering villager's vehicles not only from southern villages of the township but also from northern villages.
New Delhi â€" With the Burmese military junta finally relenting, albeit without an announcement, an international aid agency said for the first time it has sent its expatriate aid workers into Burma's cyclone devastated area in the Irrawaddy delta.
New Delhi â€" Even as the United Nations and regional countries gear up to call for more aid for Burma's cyclone victims, aid workers on the ground said time is running out.
Junta restricts movement in Rangoon
The Burmese military junta has announced restrictions on movement in Rangoon city as the date for the referendum in the 47 cyclone-hit townships in Rangoon and Irrawaddy division approach.
ကန့်ကွက်မဲများ၍ အာဏာပိုင်တို့ ဒေါသူပုန်ထ၊ နမ့်ခမ်းမြို့ခြံခတ် ၂၄ နာရီ ကင်းစောင့်ခိုင်း
Written by စိုင်းယီဖုန်း
Thursday, 22 May 2008 13:28
မေ ၁၀ ရက် နအဖ ဆန္ဒခံယူပွဲ၌ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင် ကန့်ကွက်မဲ များနေသဖြင့် ဒေသခံ လူထုအား တစ်နေ့ ၃ ယောက် ၂၄ နာရီ အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်ခိုင်းကြောင်း၊ ကင်းလှည့်ရဲများအားလည်း ပစ်သတ်ခွင့် ပေးထားကြောင်း နအဖအာဏာပိုင်တို့ ပြောသည်ဟု တရုတ်နယ်စပ် သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
ဆူနာမီ အတွေ့အကြုံကို နမူနာယူရန် ဝါရင့်အဖွဲ့ ပြော
Written by နေသွင်
Thursday, 22 May 2008 13:21
ချင်းမိုင်။ ။ လေမုန်တိုင်းဒဏ် ခံနေရသော မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ရာတွင် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၏ ဆူနာမီ အတွေ့အကြုံကို နမူနာယူရန် ပြည်တွင်းမှ ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများက စစ်အစိုးရကို ယနေ့ တိုက်တွန်း လိုက်သည်။
ထော်လာဂျီချောဆွဲ နအဖစစ်သား တရုတ်နယ်ထဲဖြတ်ဝင်စဉ် အဖမ်းခံရ
Thursday, 22 May 2008 13:17
ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့က ဒေသခံရွာသားတစ်ဦး၏ ထော်လာဂျီကိုချောဆွဲကာ တရုတ်နယ် စယ့်ဆိုင်မြို့တွင်း ဖြတ်ဝင်သွားသော နအဖစစ်သား ၆ ယောက်အား တရုတ်အာဏာပိုင်များ ခေါ်ယူ ထိမ်းသိမ်းထားကြောင်း ရွှေလီသတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
ကေအန်ယူ ဥက္ကဋ္ဌကြီး စောဘသင်စိန် ကွယ်လွန်
Thursday, 22 May 2008 13:13
ချင်းမိုင်။ ။ ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) ဥက္ကဋ္ဌ စောဘသင်စိန်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။
နာဂစ်လေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် သိန်း ၃၀၀ လှူဒါန်းရန် မောင်တောမြို့နယ်ကို ခွဲတန်းချ
Thursday, 22 May 2008 13:10
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် နယ်စပ်မြို့နယ် တခုဖြစ်သော မောင်တောကို နာဂစ်လေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် သိန်း ၃၀၀ လှူဒါန်းရန် နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များက ခွဲတန်းချ သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် နအဖစစ်ကြောင်း ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား
Thursday, 22 May 2008 13:06
ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ တပ်စုတစုနှင့် နဖအစစ်ကြောင်း တကြောင်းသည် ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။